China Inogadziriswazve Mailer fekitori uye vanotengesa | NEMANGWANA
EVERGREEN KUTENGA NOKUDZIDZA CO., LTD
Inogona kudzoreredzwa 3 Rutivi Seal Pouches
Inogadziriswazve Flat Bottom Pouches
Zvigadziriswazve Simuka Homwe
Inogadziriswazve Rutivi Gusset Pouches
Recyclable kavha Firimu
Zvishandiswezve & zvishandiswezve Packaging
3 Chikamu Chisimbiso & Pepa Homwe
Flat Pasi homwe
Kurutivi Gusset & Quad Seal homwe
Kuburikidza nekubatana kwedu muSustainable Packaging Coalition® How2Recycle® chirongwa, isu tine dzakawanda sarudzo dzechitoro chinodonhedza-dzokazve zvigadzirwa.
Anogadziriswazve Mailer ndiyo mhinduro kwayo yekuchengetedza zvinhu zvakachengeteka panguva yekutumira kana kutumira munzira ine hushamwari.
Yedu yazvino sarudzo inosanganisira isiri-chipingamupinyi uye chinodzivirira simuka homwe ine zvinotevera zvinotevera mabhenefiti:
Excellent chipingamupinyi kuti mwando multilayer mamiriro
FDA chigadzirwa chinoenderana nechero chekudya chakanangana
 Zvimiro 5 chiteshi chinonzwika-chinobata kuvhara zipi
 Inokodzera How2Recycle® Chengetera Drop-off label
Kufanirwa kweHow2Recycle @ in-chitoro inodonha.
Zvimiro & Bhenefiti
Yakadzika chisimbiso yekutanga tembiricha - inobvumidza yakakwira kumhanya mhanya pa fomu / zadza / chisimbiso kunyorera
Yakakwira kupisa kupisa - inobvumira yakakwira chisimbiso bhaa tembiricha nekukurumidza fomu / zadza / chisimbiso kumhanya
Yakaderedzwa njodzi yekutsva-kuburikidza uye homwe deformation panguva yekuvhara
Yakanaka kubwinya uye kujeka
Standard chipingamupinyi uye yakakwira oxygen chipinga zvivakwa
Inowanikwa muSignature Inotarisana neBepa Kubata, Matte uye Gloss
Inogadziriswazve Packaging Firimu. Mumusika wepasi rose, kudiwa kwekuburitswa kuri kukura kuri kuita nemazana, asi vanhu vashoma vanoteerera kukanganiswa kweiyi isingadzorekezve marara ekuratidzira pane yedu nyika uye nharaunda.
Kusvika izvi, EPP yakagadzira mapurasitiki anoshandiswazve kudzikisa kuenderera kwekukuvara kwenzvimbo. Mabhegi edu anogona kushandiswazve anogona kushandiswazve nechitoro chakadonhedzwa uye nekuchengetedza simba rakasimba uye kurovera. Ivo anoshandiswa zvakanyanya kurongedza gasi nemagetsi zvigadzirwa senge nhare mbozha.
Inogonesa yakachena yakatwasuka yekuvhura mhiri kwepakeji, iine mashoma mashoma.
(PTC Dhinda Kuvhara) Akasiyana single, mbiri uye katatu nzira, ine / kunze kurira mumarudzi akasiyana siyana.
Pedzisa Kunyoresa Varnish
Kunyoreswa Varnishes, inopa matt uye gloss kupedzisa dhizaini, saka ma brand / vagadziri vanogona kugadzira oack inomira pachena.
Kusvikira gumi Colors
Kupa supperlative kudhinda mune flex kana gravure.
ZVINODIWA ZVEMAZANA 100% ZVAKAZADZWA ZVINOGONESESWA POUCH
Mapurasitiki anogara kwenguva refu, asingaremi uye asingadhuri zvinhu. Ivo vanogona nyore kuumbwa muzvigadzirwa zvakasiyana siyana zvinowana kushandiswa mune yakawanda mafomu. Gore rega rega, anopfuura mamirioni zana ematani epurasitiki anogadzirwa pasirese. Makiromita mazana maviri emabhiridha epurasitiki zvinhu zvakagadzirwa, zvakaputirwa furo, kuraswa uye kuwedzerwa mumamiriyoni emapakeji uye zvigadzirwa. mukutsvaga mhinduro yekugadzirisa dambudziko rekuwana imwe nzira inogara iripo, Jiahe yakasvibira kurongedza yakagadzira 100% Polyethylene (PE) homwe. Mhinduro yacho inoshandisa chinhu chimwe chete mbishi muchimiro chayo, iyo polyethylene, chinoita kuti kudzokorodza kwayo kuve nyore muzvikamu zvepamberi nepashure pekushandisa, chero paine cheni, zvinokwanisika kushandisa zviratidzo zvekudzokorodza zvepasi rese: 4 (LDPE) panzvimbo pe7 (vamwe), inomiririra mabhenefiti eketani rese rekushandisa zvakare.
How2Recycle Label Chirongwa
Imwe neimwe vhezheni yedu yechitoro inodonhedza homwe inogadziriswazve inosangana nezvinodiwa zve How2Recycle® chitoro chakadonhedza chirongwa2. Tevedzera nhanho ina idzi dziri nyore kupedzisa maitiro ekuti zvishandiswezve.
1.Make chokwadi homwe chinhu chose
2.Zunza chero zvipuka zvisina kusarudzika kana chikafu chinosara
3.Bvisa chero mvura yakasara mukati mehomwe
4.Dzokera kuchitoro chako chemunharaunda
Mabhiza nemakambani anofarira kushandisa edu anoshandiswazve mabhegi vachada kuve nhengo dzeHow2Recycle® chitoro chinodonhedza-pasi kuitira kuti vashandise iwo mavara pane yavo yega tsika-yakadhindwa homwe.
Pashure: Inogadziriswazve Flat Bottom Pouches
Zvadaro: Recyclable kavha Firimu
Retort homwe / Pet chikafu bhegi / Yakagadzirira kudya chikafu pac ...
Flat pasi pouches / Plastic Food kavha / Zip ...
3 padivi rakasimbiswa & pombi pombi / Vacuum Plasti ...
RONGLI WEST ROAD, QINGZHOUCITY, SHANDONG CHINA
Nhare mbozha: 0086-13325268687